चेतन र एक व्यक्तिको जीवनमा एक तत्वको रूपमा inanimate प्रकृति
कति हामी शब्द "प्रकृति", कहिलेकाहीं अन्त सम्म साकार छैन, यो के मतलब प्रयोग गर्छन्? हामी यसको बल ठूलो छ भनेर हामीलाई वरिपरि प्रकृति, हामी एक प्रकृति मा जा भनेर छन्, कि तर असीमित छैन भन्छन्।
कहिलेकाहीं हामी जीवित र inanimate प्रकृति भनेर पनि नबिर्सनुहोस्।
त्यसैले प्रकृति के हो? को जीवित जीव inanimate वस्तुहरु वा फरक प्राकृतिक घटना? जीवित जो ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण सामाग्री संसारमा एक इकाइ, - र inanimate प्रकृति। प्रकृति - मुख्य र मात्र कुरा बाहिर आए र मानिसजातिको स्वतन्त्र बाँच्ने सबै प्राकृतिक विज्ञान, सबै पडताल छ।
हामीलाई घेरने कि सबै जीवित र inanimate प्रकृति छ। - एक मानिस र बोट भाइरस र फूल, पत्थर, हावा, पानी, र Fungi प्रकृति: उदाहरण अनन्त छन्।
चेतन र inanimate प्रकृति दोश्रो देखि भिन्न छन्। सबै जीवित कुराहरू मुख्य विशेषता, यो वैज्ञानिक मामलामा, GMO विकास, उत्परिवर्तन र प्रतिकृति गर्न सक्ने क्षमता राख्नु हो।
बस राखे, सबै जीवित कुराहरू निरन्तर बढ्दै र विकसित गर्दै छन्, breathes र वृद्धि गर्छ। सबै जीव साधारण सुविधाहरू अधिकार: तिनीहरूले आवश्यक ऊर्जा चयापचय, अवशोषित र रसायन आफ्नै आनुवंशिक कोड synthesize गर्न सक्षम। जीवित र inanimate प्रकृति पनि पहिलो पास को क्षमता पछि पुस्तामा सबै आनुवंशिक जानकारी भिन्न र वातावरण को कार्य अन्तर्गत बदलन।
Inanimate प्रकृति को अधिकार छैन आनुवंशिक कोड, र यसैले आनुवंशिक जानकारी स्थानान्तरणका सक्षम छैन। inanimate प्रकृति को वस्तुहरु, जो चट्टानहरू, पहाड, रासायनिक तत्व, स्वर्गीय शरीर समावेश, अणु र एम। N।, शताब्दीयौंदेखि अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, र मात्र तत्व को प्रभाव अन्तर्गत परिवर्तन। उदाहरणका लागि, रासायनिक तत्व तर पनि गैर-जीवित कुरा प्रतिक्रिया र नयाँ सिर्जना गर्न, सक्षम छन्। रक्स eroding गरिन्छ, समुद्रहरू - अप सुक्खामा। तर, यी वस्तुहरु को कुनै पनि छैन, उर्तानु गर्न मर्न, विकसित वा बदलन सक्षम छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रत्येक अन्य चेतन र inanimate प्रकृति फरक।
तर, माथि को सबै बीच "प्रत्यक्ष" र "inanimate" एक खाडी छ मतलब छैन। छैन सबै। हाम्रो संसार जीवित inseparably गैर-जीवित जोडिएको छन् यस्तो तरिकाले प्रबन्ध छ। inanimate प्रकृति विनाश सबै जीवित कुराहरू विनाश entails। पृथ्वीको धेरै को इतिहास मा उदाहरण। दुर्भाग्यवश, प्रकृति विनाश को मुख्य कारक को एक मानव गतिविधि छ। हाम्रो घमन्डी परियोजनाहरू riverbeds एक पटक पशु प्रजाति सयौं को मृत्यु गर्न नेतृत्व भन्दा बढी परिवर्तन। को परिवर्तन को अरल सागर को नुन मरुभूमिमा माछा बीस भन्दा बढी प्रजाति, धेरै दर्जन प्रजाति, विभिन्न बिरुवाहरु को प्रजाति सयौं विनाश गर्न नेतृत्व गरेको छ। आज मात्र होइन स्वास्थ्य तर पनि स्थानीय जनसंख्याको जीन पूल गर्न खतरा अन्तर्गत छ।
त्यहाँ एक विपरीत उदाहरण हो। चीन मा sparrows को विनाश भूमि को desertification गर्न, किरा र बाली क्षति र, फलस्वरूप को proliferation गर्न नेतृत्व गरेको छ।
हामी बाँच्न र, देखा छन् प्रकृति जो सुन्दर र विशाल संसार, चेतन र inanimate, धेरै नाजुक ब्यालेन्स छन्। यो, शिकार जनावर मा फायर primroses टिप्ने, शहरी झाडी एउटा सानो शाखा तोडने, सम्झना गर्नुपर्छ। यो नाजुक सन्तुलन तोड्न पर्छ, र सुन्दर संसारमा मात्र अराजकता रहन सक्छ, कुनै पनि जीवित वा मृत उत्पादन गर्न असमर्थ।
ऐबालोन - एक अद्भुत उपहार
Nar - मानिस र मरुभूमि लागि उँट
अफ्रिकी शुतुरमुर्ग: विवरण र रोचक तथ्य
आइरिस ककटेल: लोभ्याउने व्यञ्जनहरु को एक किसिम। ककटेल "आइरिस martini"
गर्भावस्था को toxemia के हो?
"मीठा इश्कबाज":3प्रकरण। खण्डमा। एक विस्तृत पुस्तिका
VAZ-2110: CV जोइन्टहरूमा को प्रतिस्थापन र anther आफ्नै हात